Kutsvaga YAKAKOSHA Anime Yese Nguva? Ichi Chinyorwa Ndechenyu - Zvimwe
67 Yeakanakisa Anime Anoratidza Ese Nguva (Hapana Chinzvimbo Chekuita)
Chii chinotsanangura 'yakanakisa anime' yenguva dzese?
Mhinduro inonzwisisika yakavakirwa pa ratings uye ongororo kubva kune saiti senge MAL (MyAnimeList).
Dambudziko neizvozvo nderekuti: inogumira kune vateereri vaMAL. Uye kumwe kuongorora hakusi izvo zvandaizofunga nezve 'chaiko' wongororo. Kungori kunyunyuta kwevana kubva kuvateveri ve anime.
Ipapo une anime polls iyo Japan inomhanya , kuunganidza asingasviki zviuru gumi- zviuru zana + zvemavhoti muhuwandu. Iyo shoma nhamba kana iwe uchifunga nezve 50-100 mamirioni evateveri kutenderera pasirese.
Nekuda kweizvozvo, hapana nzira yakakwana yekugadzirisa idzi nhaurirano dzinozviisa pasi.
Saka nezvakataurwa… Heino runyorwa rwangu rweakanyanya anime nguva dzese!
Anime iyo yandinonzwa kuti ndiyo YAKANAKA, uye inokodzera zvese kana yakawanda chikwereti kupfuura chavari kuwana.
67 Akanakisa Anime Ese Nguva (Pasina Chinzvimbo Chekuita):
Monster inoita chinhu chimwe chete nemazvo: ratidza 'chikara chemukati' mukati medu tese.
Zvese zvinotora ndeye zvisizvo seti yemamiriro ezvinhu kukonzera mumwe munhu munzira yerima. Kumutsa chakaipa isu hatina kumbofunga isu pachedu kugona.
Mashoma anime ndeaya echokwadi.
Violet Evergarden inopenya nekuda kwenyaya yayo yemoyo, yepamoyo kutaura.
Iwe haungonzwe kunzwira tsitsi kumunhu mukuru, iwe unonzwazve nezvevatsigiri vanoratidzwa munzira.
Violet Evergarden inosanganisa zviitiko zvakanaka, zvinoshamisa mifananidzo, uye zvine simba nyaya zvese mune rimwe bhora rehukuru.
3. Clannad: Mushure meNhau
Clannad mwaka 1 yanga yakanaka, asi haina kana kuenzanisa nehukuru hwemwaka wechipiri.
SaViolet Evergarden, Clannad Mushure meNhau izere nemarwadzo uye kusuruvara. Zvese zviri zviviri vashoma anime vakakwanisa kuratidzira zvakakwana.
Jormungand ndiyo yega anime yerudzi rwayo kuratidzira hupenyu hwevatengesi vezvombo. Iko kwechokwadi kwenyaya inotaura, zviitiko, uye mararamire anotungamirwa nevatengesi vezvombo zviri padanho.
Iyi anime inyanzvi kune zvazvinoita uye zvine chinangwa chekuita.
Madoka Magica akauya mumufananidzo ndokuti: 'f * ck zvese izvi zvinonzwisisika zvemashiripiti musikana bullsh * t, inguva yekuzunza zvinhu kumusoro'.
Ndizvo zvinoita Madoka Magica zvakanakisa. Panzvimbo yekutevera yakajairwa nzira, iyo yakaputsa musangano uye akachinja iyo genre kuita chimwe chinhu chakasviba uye chinovhiringidza.
6. Lagoon Dema
SaJormungand, Nhema Lagoon ndeimwe yeanonyanya kuomesa anime papasi.
Hunhu hwega hwega hwakave nenhamo yakapfuura yakabatana nekubatwa chibharo, kushungurudzwa pabonde, zvinodhaka, mhosva, uye zvese zvinomirirwa nepasi.
Nhema Lagoon inoita zvakanyanya mudhipatimendi iri. Uye chiito chinotaura choga.
Psycho Pass inoongorora sci-fi kubva mumaonero emapurisa nemutemo. Uye ngatirege kukanganwa nezve tekinoroji iri saka pamberi penguva yayo mune ino anime akateedzana.
Kune mashoma emapurisa akateedzana sezvazviri mune anime nyika, uye Psycho Pass inoita kuti zvinakidze kutarisa pasina cliches.
Kudaidza Psycho Pass 'yepakutanga' ndeyekunyepedzera. Iko hakuna kuenzanisa nezvazvinoita.
8.Munondo Art Online
Sword Art Online inoshambidzwa pamusoro pemusoro wayo zvakawandisa. Kutaura zvazviri ndiwo mabudiro andakazozviita. Iyo vavengi zvakaita kuti ndide kuziva.
Izvo SAO inoita zvakanyanya musanganiswa wemitambo neicho chaicho, uye nekuchiita kusviba zvishoma kunatsa zvinhu.
Panyaya yekutamba uye VR, hapana anime inosvika padyo nezvinomiririrwa neSAO. Uye kubudirira kwayo kunopfuura kukodzera.
Iyo anime iri pamberi penguva yayo.
Uye Sword Art Online: Alicization ndiyo yakanakisa yatakaona kubva kuSAO akateedzera kusvika ikozvino.
Akame Ga Kill ndizvo zvinoitika kana vagari munyika vapandukira hunyengeri, husina hunhu hurumende nenzanga.
Izvi ndezve izvo Akame Ga Kill iri nezve, uye inojekesa poindi yayo kuburikidza nehutsinye, chiito chakasimba, uye zvimwe zve zvakanaka kurwisa zviitiko izvo Anime anofanirwa kupa.
Icho chidiki chisina kujairika futi munzira iyo inobata vanonyanya kutaurwa (uye kufa kwavo).
Shiki anotanga kunonoka, asi unopedzisira wave kuita chinhu chakasviba, chinovhiringidza uye chinonetsa mutsika, zvekuti hauzoziva zvekufunga.
Icho chinhu chimwe chete icho chandinoda zvakanyanya pamusoro paShiki. Chimwe chezvinhu zvinotyisa zvakanyanya nguva dzese.
Kune rimwe divi, Hinamatsuri ichaita kuti iwe ubvaruke nekuseka kuseka kwayo kwekuseka.
Pane rimwe divi, iyo anime ichakuunza padhuze nekuchema uye vachichema.
Kunze kweanime rose randakatarisa, saka vashoma vanogona kugona kuratidza mutambo uye 'kusuruvara' zvakanaka pasina kupera chimwe chacho.
Ndo izvo zvinoita kuti Hinamatsuri ive yakakosha kwandiri.
12. Miss Kobayashi's Dragon Maid
Shato dzinogara padivi pevanhu hadzigadziri pachadzo. Asi nzira iyo anime inoitisa iyi pfungwa uye kuishandura ikaita inosetsa mutambo, pamwe ne 'slice yehupenyu' zvinhu zvinonakidza.
Uye zvinotaridzika kugona kuzviita.
Imwe yeanime anime ekugadzirisa yakaoma pfungwa senge kushushikana uye kuzviuraya.
Neichi chikonzero chete, uye ne sei inoratidzwa kubva pakutanga kusvika pakupedzisira yakanyanyisa kunetseka kuti ifuratirwe.
Ndinoyemura iyo yakasarudzika yehupenyu.
14. Dhiragoni Bhora Z
DBZ ndeyekare. Ndicho chikonzero indasitiri yeanime kunyange iripo pasirese yepasirese.
Hapana chimwe chekutaura.
Bleach iri chaizvo DBZ isina mavara eOP.
Taura zvaunoda nezve Bleach, asi hapana anime ingambozvitsiva pane zvazvinoita.
Inoenderana: Iyo YAKUKURUKURA Anime Anodheedzera Kubva Bleach Iyo inomira Iyo Kuyedzwa Kwenguva
16. Muroyi Wekubhururuka
Flying Witch ndiyo yakapusa, yakawanda kuzorora akateedzana andakamboona.
Hapana clichés, fan fan kana yakajairika zvisina maturo inoonekwa mune yako yemazuva ese anime. Uye ndizvo zvinoita kuti Flying Witch ibude pachena.
Ndicho chinhu chepedyo kune 'chaicho' terevhizheni, kunze kwekunge iine hupenyu.
17. Muroora Wangu Ndiye Mutengesi
Underrated anime akateedzana ayo asingawani rudo rwakawanda kana kuzivikanwa.
Yayo nguva iyo komedhi (uye parody) ndeimwe yeakanyanya kuitwa-akanaka andakambosangana nawo.
Iyo yepakutanga mutambo mune yayo chaiyo.
18. Fairy Muswe
Fairy Tail ine yakanakisa adventures iyo anime inogona kupa. Inofananidzwa nezviratidziro senge DBZ.
Handisati ndamboona mavara mazhinji zvakadaro asingakanganwike uye akakosha panguva imwe chete.
Zviri chaizvo zvandinofarira Shounen akateedzana ezana ramakumi maviri nemasere.
19. Hupenyu Hune Njodzi hwaSaiki K
Imwe yeanonyanya kuseka, akanyanya kugadzira ma comedies emakore apfuura. Ndinochida inotuka zvakajairika tropes, isina chaizvo kutsika mundima iyoyo.
20. Re Zero: Kutanga Hupenyu Mune Imwe Nyika
Imwe anime iyo inotuka zvakajairika tropes, uye haizvitore pachayo zvakanyanya zvakanyanya.
Uye iyo yakadzika, yakasviba, yepfungwa maficha eRe Zero inoita iyo anime iyo inoita kuti iwe ufunge.
Inoenderana: 5 Zvikonzero Zvakareruka Nei Emilia AKANAKA Kupfuura Rem Kubva Re Re Zero
21. Higurashi: Kana Vachema
Higurashi yakafanana neyeimwe huru yesainzi kuyedza. Zvinotomboita kusaziva kuziva zvichaitika zvinotevera, uye kuti zvinhu zvichamira sei.
Kune akateedzana anotyisa, hazvifungidzike, zvine hungwaru, uye chimwe chezvinhu zvinonyanya kufunga.
22. Tanaka Kun Anogara Asina Musoro
Yakareruka anime ine yakapusa comedy. Zviri nyore kwazvo kuti zvinosekesa, uye Tanaka Kun ari kuzorora zvakakwana kukotsira kusvika.
Chidimbu chehupenyu chinotarisa pamifungo sekuzvivandudza, kukura, kufunga uye hukama
Iwe haugone kuenzanisa Barakamon. Uye kwechikamu chipfupi, ine mhando yakawanda yakarongedzwa mairi.
24. Gamba Rangu Academia
My Hero Academia ndeimwe yeakanyanya anime ezana ramakumi maviri nemasere. Iyo Shounen genre yaida chimwe chinhu chitsva, uye MHA ndiyo mhinduro kune icho chinodikanwa.
Shakugan No Shana chisikwa chose chakakura chakazara nemaDenizens, Flame Haze nevanhu vanobatwa vari pakati.
Iyo ine musanganiswa wakanaka wezvinhu zvemweya (pasina kuenda pamusoro), yakanakisa mifananidzo uye vanonakidza mavara ane anonakidza kugona.
Mwaka wega wega wakasiyana, uye ndeyeyakajairika yakazara mumaziso angu.
pamusoro gumi anime akateedzana enguva dzese
26. Eureka Zvinomwe
Mecha dzakateedzana pasina Aihwa kuenzanisa.
Eureka Zvinomwe (yakaitwa neStudio Bones) inoshandisa zvakavanzika, mareferenzi ebhaibheri, mavara akasiyana uye kudanana kutaura nyaya yayo.
Uye hapana Mecha pasi pano anozviita zvirinani munzvimbo ino (kunyangwe Darling Mune Iyo Franxx).
27. Yakazara Metal Panic!
Yakazara Metal Panic inotora kudanana kwechikoro chepamusoro, uye inowedzera hugandanga, chiito, uye chokwadi kune yakasanganiswa.
Iyi ndeimwe yeaya asingawanzo anime anowana kunyange zvirinani nemwaka wega wega unoburitswa.
28. Kukwira Kwenhoo Yenhovo
Kukwira Kwenhovo Shield ari ichangopfuura anime akateedzana kubva 2019. Asi ndeimwe yeashoma Isekai ini ndinoyera zvakanyanya.
Naofumi kurwisa chaiko kurwisa iyo miviri miviri zvekushungurudzwa pabonde, uye kuti shoko remukadzi rinotendwa sei pasina humbowo.
Iko kushatirwa kusingaperi kwehunhu hwake, uye vanhu vazhinji vachiramba 'kufunga' kana kubvunza kuti ichokwadi here kana kuti kwete ... Tisingataure nezvehukama hwaNaofumi naRaphtalia (nezvimwe zvinhu).
Shield Hero inyaya inonzwisisika zvisina mumwe, uye izvozvo anotonga zvirinani kupfuura izvo vazhinji anime vanogona kutora.
Kana zvasvika kune anime nezvakaitika zvinhu, Fate Zero rinotonga. Kunyanya pamatanho ayo ekupenga ekuita, kunyatsoita uye varaidzo.
Ini handidi kuisa chero imwe Fate dzakateedzana nezve Fate Zero, asi yakawandisa yemhando dzakateedzana ZVIZIVA kupenya mune yekuita genre.
30. Chikoro Rarama
Chikoro Kurarama chinotaridzika, asi pachokwadi ndechimwe che zvakadzika inoratidza pane iyi chinyorwa. Kubata madingindira senge chirwere chepfungwa, psychosis, kuona zvinhu zvisirizvo uye nemimwe misoro yakafanana.
SaMadoka Magica, iyo anime inokunyengedza kuti ufunge kuti inonakidza nhevedzano kudzamara yanonoka kudzoka.
Verenga: 20 YeIye Akanyanya Kusviba Anime Anoteedzana Anozokuvhundutsa Iwe
Gurren Lagann angori a Hype akateedzana. Uye kana ndikati hype - ndinoreva kuti ine simba, haina musoro, inokurudzira uye inokuita kuti uputirwe.
Ndiri kuona paanoratidzira saKill La Kill akatora kufemerwa kubva. Gurren Lagann ichagara iri yechinyakare mumaziso angu.
32. Dhiabhorosi Ndiye Chikamu-Nguva
Kufanana nehupenyu hwakaipisisa hwesiki k, iyi anime inogadzira maratidziro ainoita pachayo. Vashoma veanime anime vanogona kuti ivo vane hunyanzvi seIYO vachiri kunakidzwa.
Nhau yacho yakangoseka-seka kuti irege kuseka. Isu tinonyatsoda mwaka 2 wekuti Dhiabhorosi Ndicho Chikamu Chikamu!
Kufunga Kunetsa Anime akateedzana, akatarisa pane chimwe chinhu kunze kwe:
Kushanda pamwe chete kugadzirisa mapuzzle.
Uye 'kutamba mutikitivha'.
Pamusoro hazvinzwike-epasi rose, asi mashandisiro ayo imwe nyaya.
34. Kana Zviri Zvemwanasikana Wangu
Kana Zviri Zvemwanasikana Wangu yakaburitswa mu2019. Uye ini ndakapinda mairi ndisina tarisiro.
Chikamu chekutanga chinotanga naDale uyo anowana mwana wedhimoni musango, uyo mhuri yemhuri yakauraiwa.
Iye anotora uyu musikana uye anomutumidza zita 'Latina', uye ndipo panobva zita reanime.
Zviri wakasununguka chidimbu chehupenyu ine yakawanda inodziya episheni uko vanonyanya kutaurwa zvisungo, uye hukama hwavo hunoramba huchikura.
Iyo zano haina chinhu chakakosha, uye haisi yakanyanya kupenya anime saka haizofadze chero munhu anowedzera muShounen. Asi kune izvo zvarinopa - Kana Zviri Zvemwanasikana Wangu zvinofadza moyo sezvazvinowana.
Iine mamiriro emanzwiro saViolet Evergarden.
35. Mafambiro aKino: Nyika Yakanaka
Mafambiro aKino: Nyika Yakanaka ndeye anime akateedzana anoita chinhu chimwe zvakanyanyisa mushe: taura nyaya.
Kino anofamba nyika pamudhudhudhu wake, asingagare anopfuura mazuva matatu munyika yega yega.
Pasi pechiso iyi anime inoratidzira nzwisiso yakadzama nezve vanhu uye nemararamiro atinoita, pamusoro pemafungiro uye psychology inoenda kumashure kwetsika dzakasiyana dzatinogara madziri.
Nyore imwe yeanime mukurusa yenguva dzese.
36. Kokoro Unganidzo
Kokoro Connect haina kuverengwa se 'yepfungwa' dzakateedzana, asi nezvekuti yakaratidzwa sei? It zvirokwazvo ndizvo.
Chidimbu chehupenyu uye kudanana parutivi, iyi anime ichaita kuti iwe ufunge seisina imwe show yerudzi rwayo. Nezve zvinhu senge shamwari dzako dzinonzi 'chaidzo' dzinofunga nezvako kana uchitaura kumashure kwako. Kana izvo zvavanofunga 'nezvako kazhinji.'
Inoenderana: Rondedzero Ye makumi matatu Epfungwa Anime UNOFANIRA Kufunga
37. Rufu Chiziviso
Mushure mekutarisa Rufu Chinyorwa gore rino (2019) ini ndinogona kuona kuti nei iyi anime iri zvakurudzirwa nevanhu vazhinji.
Ini ndinowanzo dzivisa kuratidzirwa kumusoro, asi kupenya kwechirongwa, vatambi uye maficha epfungwa haana chaanopomerwa.
Ini ndinopa Rufu Chinyorwa 10/10. Iyo ndeimwe yeanime yakanakisa yenguva dzese.
Shirobako ndeye anime VOSE vateveri vanofanirwa kuwona.
Izvo ndezve indasitiri yeanime ine chaiyo kutora pane zvinoitika kuseri kwezviitiko.
Basa rinonetsa, maanimator, ma studio uye nevashandi vari kuwedzerwa basa. Iwo marongero, magadzirirwo eanime, kutungamirwa, uye kugadzirwa…
Iwe hausi kuzowana imwe chete dhata isipo kubva kune maitiro ezvinopinda mune anime muJapan.
Hazvina kungoitika chete, zviri pamutemo kusvika pahunhu uye varaidzo yaunowana kubva kuShirobako.
Zvirokwazvo imwe yeiyo yakanakisa anime ye2010's.
39. Sakura Kutsvaga
Sakura Kutsvaga iri underrated chimedu chehupenyu dzakateedzana. Yakagadzirwa kumashure muna 2017 Kana ndisina kukanganisa.
Iko kusanganiswa kwakanaka kwekushanya, bhizinesi, mutambo usina moyo uye nyaya ine musoro inomhanya kubva pakutanga kusvika pakupedzisira.
Rondedzero iyi yaisazove yakanaka pasina iyo!
40. Kenichi: Mudzidzi ane Simba
Kenichi anozvitorera pabasa rake rekudzidzira kuhondo, achimupa simba rekuzvidzivirira uye kuwana kuzvivimba kwake.
Munyika umo kudheerera kunoitika mazuva ese, iyi anime inokurudzira. Kunyanya kune vechidiki.
41. Mutariri weMweya Mutsvene
Ini ndinoda anime ine kunzwa kwe 'nhoroondo' yakanamatira pairi.
Guardian weMweya Mutsvene unoreva nezve muchinda akasiyiwa nemurindi wake wechikadzi.
Kugadzira I.G vakazvikunda zvakare (vakaita Psycho Pass).
42. Zvekudya Hondo
Ndeipi anime iwe yaunoziva iyo inotora chikafu, uye inowedzera ecchi pasina kuzviita benzi?
Zvekudya Hondo zvinotonga mu 'chikafu' mhando, kana icho chiri kunyange chinhu.
Iwe hauzoone yakasarudzika, yakasarudzika Shounen iyo inotora nzira isingaenderane seFood Wars.
Inokodzera zvese budiriro yainogona kuwana.
43. Imwe Sainzi Railgun
Kunobva: Mikoto Misaka
Railgun, yakafanana neHinamatsuri, inotarisa pazvinhu zviviri panguva imwe chete.
Slice yezvikamu zvehupenyu.
Icho chiito chiri kurwara, uye chidimbu chezviitiko zvehupenyu chakatonhora.
Uye tichiri pamusoro wenyaya: Railgun iri AKANAKA zviri nani anime pane Magical Index.
44. D. Akachena Munhu
D. Grey Man agara achinzwa zvakasiyana kwandiri. Mazhinji Shounen angori… Shounen.
Kune chaiwo e1000's eShounen nekuti iyo genre izere neBS.
D. Grey Man ndechimwe chevashoma vanomira-kunze vasina kubvarura mamwe maonesheni akanaka emhando yakafanana.
Code Geass ndeye yangu # 1 Mecha / chiito anime akateedzana, zvachose.
Iwo mazano ehungwaru, vanhu vane hunyanzvi, hutsinye hwaLelouch… Pane zvakawandisa kutumidza pano tichitarisa kuti sei Code Geass iri shasha.
Asi chinhu chimwe chinomira pachena ndeye 'chess-senge' zano rezvinhu.
Lelouch anofunga nhanho shanu musoro uye achaita chero chinotora kudzikisira chero matambudziko anouya kubuda muhondo.
Kune zvekare zvimwe zvakafanana pakati peLelouch Lamperouge uye Chiedza Yagami kubva kuRufu Ruzivo!.
46. ​​Kuuraya Kirasi
Imwe nyowani yakateedzana mu 'chikoro' mhando yeanime.
Kufananidza izvi neyako yemazuva ano anime anime kutuka. Nekuti rakasarudzika munzira yaro uye hunhu hukuru: Koro Sensei yakanyorwa zvirinani kupfuura vazhinji vevanojairika vatambi mazuva ano.
Iyo zano yacho pachayo ndeyepakutanga uye hapana chakafanana nechinhu chero chipi zvacho chaungaedza kuzvienzanisa ot.
Chinhu chimwe chete chandinoremekedza zvikuru nezve Samurai Champloo ndechekuti inosanganisa sei tsika dzeSamurai ne vibes dzeHip Hop.
Handikwanise kufunga nezve chero anime inoita izvi. Uye ivo vatatu vanonyanya kutaurwa vakasiyana zvakanyanya kune mumwe nemumwe, izvo zvinoita kuti mumwe nemumwe wavo ave nyore kuyeuka.
Samurai Champloo ndeyemhando yepamusoro.
Kaizaki Arata, ane makore 27 -NEET anopiwa mumwe mukana wekuti 'aitezve' hupenyu hwake. Kumupa iye mukana wekugadzirisa zvikanganiso zvake, uye kugadzira chimwe chinhu chake.
ReLife chimwe chinoshamisira chitsva chikoro nhevedzano iyo yakanyanya underrated.
Skip Beat idhaimani rakavanzika vanhu vazhinji havaone kupenya kwe. Mushure mezvose - ine fanbase, asi ndizvo kwete zvakanyanya.
Izvo ndezve musikana anozvitsiva pane wake mukomana wepamoyo uyo akashandisa basa rake rakaoma, mari, uye naïvety kuti abudirire mune rake rekuita basa. Chete kumudhonzera senge iye haasi sh * t.
Ini ndinoenderana nechikurudzira chekutsiva. Asi hunhu hunouya neiyi anime nekuti zveichi chinangwa chakandibvisa.
Ivo havachaite madanho erudo seIYI zvekare.
Inoenderana: Yekupedzisira Rondedzero Yekusvetwa Beat Quotes Iwe Unogona Kuenderana Na
Charlotte angori a yakasarudzika akateedzana. Zvinotora iyo yakajairika pfungwa yemasimba makuru, uye kuifuratira pamusoro wayo.
Panzvimbo pekuti chimiro chega chega chine simba risingagumi, pane miganho kune izvo zvavanogona kuita. Uye kunyangwe kudzikira pasi kushandisa kwavo kugona, kuchiita kuti ive yechokwadi uye yakapusa pane yakafanana enzaniso.
Inoenderana: Nei Charlotte Ari Akasiyana Anime Anoteedzana
51. Muroyi Mudiki Academia
Kana ini ndikazowana mukana wekuva 'mwana' zvakare, iyi ndiyo anime yandaizotarisa.
Hapana fan fan.
Kwete 'kuyedza' fan fan.
Hapana BS yakamonyaniswa.
Chaizvoizvo: ese ma clichés aunowana mune akateedzana akafanana haapo muLWA.
Studio Trigger yakapfuura ivo pachavo, uye iyo anime inokodzera kuzivikanwa zvakanyanya kupfuura zvavakawana kusvika ikozvino.
Iko hakuna kuita senge yekare chikoro 90's anime. Vaurayi vakafamba nzira yavo voga, uye vakafemera 'yakasimba vakadzi' hunhu tropes iwe waunoona mune yanhasi-ezuva ratidziro.
Ndinoidaidza iyo yekare chikoro vhezheni yeFairy Tail (isina fan fan). Iyo yakanaka imwe nzira kune vateveri veDBZ.
pamusoro gumi anime enguva dzese
Imwe zvekare yechikoro dzakateedzana ini handina kukwanisa kubatsira kuwedzera kune iyi runyorwa. Mimwe yemifananidzo yekare yechikoro uye dhizaini ndizvo zvandinoda kusvika nhasi.
Ini handitaure nezvaInuyasha zvakanyanya, asi zvichiri kufarira zvisinei.
Iyo yepakutanga yenguva yayo, uye Isekai haizove yakafanana pasina Inuyasha .
K-On ndiye mambo uye mambokadzi we 'Moe' sekuziva kwedu. Asi handizvo zvinoita kuti anime akoshe kutaurwa.
K-on ndeye yakakurumbira nhevedzano iyo isina zano chairo, asi ine anokwana anonakidza mavara uye episodes kuti zviite zvakakosha.
Iyo komedhi ndeimwe yeiyo zvakanaka Ndakaona mune anime akateedzana, uye ini ndaisatombofunga nezveK-On 'yakaoma' komedhi.
55. Anodya mweya
Kudya kweMweya kwakadzikira pasi mumhando yeShounen. Kuwanda kwenguva iyo showa isingatombobuda mukukurukurirana kunoshamisa. Nekuti iyo anime pachayo ndiyo yandaizodaidza kuti 'mainstream' yekubudirira kwayo.
Icho muenzaniso wekutanga weiyo 'huru' Shounen akateedzana anotaridzika nemukadzi (uye murume) protagonist. Uye vanotsigira mavara ane echirume + echikadzi mabasa.
56. Ndarama Kamuy
Goridhe Kamuy isingawanzo nhevedzano yehunhu hwayo hwenhoroondo. Vashoma anime vanoenda zvakadzika munhoroondo yavo saGolden Kamuy, iyo inosimbisa nhangemutange yekare yeJapan inonzi: Ainu.
Uye chokwadi chekuti Golden Kamuy ari kuvaraidza asina kunyanya kudzidzisa zvinoita kuti zvinakidze uye zvinakidze kutarisa.
Verenga: 12 YeIyo Yakakurumbira Anime Nezve Tsika dzeJapan
57. Nzvimbo Inotungamira Kupfuura Iyo Nyika
Kana iwe uchindiziva zvakanaka - iwe uchaziva kuti ini haigoni kumira kutarisa anime mune subbed vhezheni. Ndingatoda kutarisa ndichidaidzwa uye dzivisa kuverenga zvinyorwa zvidimbu panguva imwe chete.
Asi Nzvimbo Inoenderera Kupfuura Iyo Yenyika akandiita kuti ndide kuziva ndakazvitarisa mushanduro yekutanga. Uye ndinofuridzirwa nehunhu.
Ndiyo imwe yeano nyaradzo anozorodza zvikuru akaburitswa muna 2018.
Kuidaidza kuti 'kukurudzira' hakusi kutaura.
58. Yona Yemambakwedza
Yona Wa Kwayedza ndiyo anime yandaigara ndichida kutarisa. Ndiri kufara kuti ndakazviita.
Neimwe nzira Yona Of The Dawn is an adventure, supernatural series with comedy so fresh (and silly) zvekuti zvinoshamisa. Kunyanya pamusoro pezviito zvese, zveapo neapo kudanana uye zvehondo-zviitiko nguva nenguva.
Iye zvino inoda mwaka wechipiri!
59. Uraya La Kill
Zviri zvisingaite maEcchi akateedzana sei angave chiito chakazara nenyaya yakanyorwa mushe.
Uye ndosaka Kuuraya La Kill kwakapwanya zvandaitarisira zvisirizvo ndokutora kufarira kwangu.
Studio Trigger vabuda vega neiyi. Ichagara iri imwe yeanime yangu yepamusoro nguva dzese.
Inoenderana: Yekupedzisira Rondedzero YeKill La Kill Quotes
Handina kumbofunga kuti 'Shoujo' anime ingave inonakidza zvakadaro. Uye ndipo pandakakanganisa.
Mushure mekumhanyisa muanime saNana, yakaburitswa naMadhouse, handigone kutenda kuti ndeyechokwadi uye ine simba sei nyaya dzerudo idzi.
Iwo magadzirirwo 'echokwadi kuhupenyu', uye mavara acho anodzokororwa mumatunhu mazhinji.
Vashoma kudanana vanouya padhuze neizvi nekuda kwechokwadi.
Inoenderana: Iyo Yekupedzisira Rondedzero YeChidimbu cheHupenyu Anime
61. Aria Iyo Mifananidzo
Nzira yakanakisa yekutsanangura iyi anime ndeiyi: nyoro, kuenda-nyore uye kuzorora zvakadaro kuita sekutonhora pamhenderekedzo.
Iyo haina kureruka pane komedhi, asi izvo zvinyengeri zvidzidzo zvehupenyu uye hunodziya-moyo hunhu hunoita ichi chidimbu chehupenyu nhevedzano hapana fan anofanirwa kumbopotsa.
Uyu mumwe Ecchi dzakateedzana dzakaparadza tarisiro yangu yakaderera. Uye akachitsiva nekugutsikana.
Shimoneta ipiritsi rakaomesa kumedza vateveri vazhinji, nekuda kwekunyanyisa kwazvinoita pane zvavanotenda, zano, mutauro uye chinangwa. Asi kana iwe uchikwanisa kuidya, iwe unozoshamiswa nekudzika uye kunyangwe komedhi iyi anime inofanirwa kupa.
Minami-Ke ndeye underrated , kukanganwa chidimbu chehupenyu uye komedhi akateedzana. Ndezve hanzvadzi nhatu dzinogara mumhuri imwe chete, uye mashenani ese avanosimuka.
Nemwaka mitatu muzvizere uye cliches izvo zviri chaizvo zvinosetsa, handina kumbobvira ndapinda muchikamu ndisina kuseka.
Ini ndaiyera 10/10 ndisingazeze.
64. Nyika Yevanopenya
Nyika Yevanopenya iri anime inoita kuti CGI iratidzike zvirinani kupfuura nakare kose. Uye kana iwe watarisa yakawanda yeanime, iwe unozoziva kuti inotyisa sei CGI iri mune zvese.
Nyika Yeiyo Inopenya inoitora kune imwe nhanho yehunhu hwayo hwehupenyu. Ndingangoti zviri nani kupfuura Violet Evergarden nenzira yayo.
Uye iyo nyaya yacho pachayo isinganzwisisike asi inonakidza zvakakwana kukutakura iwe kusvika kumagumo usina kunzwa sekunge watambisa nguva yako.
Zviri hukuru akateedzana ane mavara asingakanganwike.
Monogatari rudzi rwakakosha rweanime mune zvemweya / dhimoni genre. It’a mhando yeanime iyo izere nhaurirano uye “chatty” zvikamu, saka zvinogona kudzora vamwe vanhu kure.
Asi kana iwe ukaomerera pairi uye ukasvika kune akanaka zvikamu, iwe unozoona kuti kufunga kunokatyamadza uye kunakidza iyi anime kunoitika kuva.
Uye nayo ichiburitswa neStudio Shaft, iyo maficha uye shanduko pakati pezviitiko zvakanaka.
Zviri nhetembo mukufamba.
Nisekoi inogadzirwa zvakare ne studio Shaft, senge Madoka Magica uye Monogatari.
Izvi hazvina kuita seyakajairika yako harem anime uko kwayo izere necliches uye mapenzi mapenzi ayo ari zvakaoma kutora zvakakomba.
Nisekoi akateedzana zvemhando yepamusoro aine mamwe mavara akakodzera anoita kuti anime yese ivheneke semuti weKisimusi muna Zvita.
'Iyo hunyanzvi' ndeyechokwadi.
Kana iwe uchida kutarisa chidimbu chehupenyu akateedzana neakawanda DZEMA kune vatambi, uye meseji inokanganisa kufunga - Oregairu ndiye anoona.
Zvinenge hapana yevatambi mune dzino nhevedzano haina kunyorwa zvakanaka. Vatambi vanonyanya kubata akakosha zvakanyanya mune yakazara nyaya, uye dzimwe nguva 'zvakavanzika' mameseji pasi pechiso.
Ini ndinonzwa sekunge Oregairu akatsikirirwa uye vanhu vasina kukwana vanoshevedzera nezvazvo zvakanyanya. Kunyangwe zvikaverengerwa zvakanyanya.
Owari Kwete Seraph.
Kwete Vasiri Biyori.
23 YeIye Mukurusa Anime Kutaura Kutaura Kwenguva
Maitiro Anime Akachinja Zvakanyanya Mumakore 57 Makore